Ny morontsiraka espaniola mangina indrindra amin'ny fahavaratra | Vaovao momba ny dia
Ny morontsiraka espaniola mangina indrindra amin'ny fahavaratra
Raha andro lasa izay dia efa nilaza taminay izahay hoe inona ny morontsiraka be olona indrindra amin'ny fahavaratra, lahatsoratra mety indrindra ho an'ireo izay tsy maniry vahoaka sy ho an'ireo izay te hanao fety sy hihaona amin'ny olona, ​​dia mitondra lisitr'ireo torapasika Espaniola mangina indrindra amin'ny fahavaratra izahay.
Raha miala sasatra ny zavatra tadiavinao Amin'ny fatorianao, mandro mangina tsy misy famafazana sy sunbathe be loatra nefa tsy misy feo be loatra na misy baoritra amoron-dranomasina manomboka eto ka hatrany, ity no lahatsoratrao. Eto no hahitanao ny toerana fialan-tsasatrao manaraka.
Lanzarote dia tototry ny morontsiraka morontsiraka sy mangina. Iray amin'izany ny Morontsiraka Bajo el Risco, voatahiry ambanin'ny Risco de Famara, miaraka amin'ny rano feno loko sy ny tontolo wild sy rustique. Fantatra amin'ny morontsiraka manirery izy io, izay milaza fa tsy hanana olana isika rehefa miala sasatra ary mahita io fotoana mangina irintsika io.
Morontsirak'i endrika voajanahary sy bibidia. Voaro amin'ny hantsana mideza ary miaraka amin'ny fanambanin'ny vatolampy, izay manome antoka fa mandritra ny volana fahavaratra dia mamorona tontolo milamina sy manirery izy io.
Cala Pedrosa dia manana tolotra trano fandraisam-bahiny tsara ary tena ekonomika koa, noho izany dia mety ho toerana fialantsasatra tsara, amin'ny lafiny rehetra.
Izy io dia cove voajanahary amin'ny vatokely sy vatokely rano madio amin'ny tontolo iray izay miavaka ny kesika manakaiky ny ranomasina. Ny faritra dia mety amin'ny filomanosana, antsitrika na sambo. Malalaka izy io, madio sy madio ny ranony, mahatonga azy io ho an'ny fitsangantsanganana an-dranomasina tsara tarehy.
Ny fiadanany dia noho izy io a faritra voajanahary voaaro. Mitoka-monina izy io, miaraka amin'ny onja malefaka ary miaro amin'ny fanafihana miaraka amin'ny akanjo lava noho ny rindrina vatosokay. Mafana ny ranony ary saika tsy misy ny fasika misy azy.
Toerana very eo amin'ny morontsirak'i Galisiana izy io. Ao amin'ny Aldán estuary misy lava-bato mitokana sy manirery, toy ny an'ny Pipín (Cangas, Pontevedra), miaraka amoron-dranomasina fasika fotsy mangatsakatsaka izay mahatonga ny rano milamina kokoa hanjary kristaly. Sahabo ho 28 kilometatra miala an'i Pontevedra izany.
Araka ny ahitanao ny endrika mahavariana sy ny filaminana milamina. Ankehitriny ianao dia afaka misafidy ny tanàna amin'ny fialan-tsasatrao manaraka!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Ny morontsiraka espaniola mangina indrindra amin'ny fahavaratra